Masinina fanamboarana vera
Masinina miova amin'ny angotra miovaova amin'ny fitaratra
Machine Wave Beveling
Machine boribory faribolana fitaratra
Masinina miendrika vera / milina beveling
Fanala rano amin'ny vera
5 Karazam-baravarankely mahazatra
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-08-14
Ny fitaovana fitaratra dia afaka mahazo karazana fitsaboana amin'ny endriny maro isan-karazany, izay samy hisy fiantraikany manokana amin'ny fiasa ankapobeny sy ny fahombiazan'ny sombin-javatra vita. Ny fanovana dia afaka manatsara ny fiarovana, ny hatsarana, ny fiasa ary ny fahadiovana ary manatsara ny dimensiona ...
Ny efitrano fampisehoana vaovao ZXM ho an'ny edger roa heny dia misokatra ao Lunjiao, Foshan City.
Tongasoa eto hitsidika sy hisafidy ny masinina ZXM. 15th April, 2020 Masinina fanodinana vera avy amin'ny ZXM natsofoka tao anaty kaontenera ho an'ny firenena afrikanina. ...
Ahoana ny fiasan'ny vera ambany-e
Ny fitaratra dia iray amin'ireo fitaovana fananganana malaza sy be mpampiasa indrindra ampiasaina ankehitriny, noho ny ampahany amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fanatanterahana ny masoandro sy ny hafanana. Fomba iray hanatanterahana an'io fampisehoana io amin'ny alàlan'ny fampiasana pataloha ambany sy ambany fanaraha-maso ny masoandro. Noho izany, inona no atao hoe low-e gla ...
Fa maninona no mamaritra ny karazana fitaratra?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-11
Ny fisafidianana ny vera maritrano marina dia zava-dehibe amin'ny tetikasa mahomby. Ho an'ny fanapahan-kevitra misimisy kokoa momba ny fanombanana, ny fisafidianana ary ny famaritana ny vera maritrano, Vitro Architectural Glass (vera PPG teo aloha) dia mamporisika ny hahafantatra ireo fananana a ...
Ahoana ny fisafidianana ny milina fitaratra mahitsy mitsipika beveling?
Ny milina beveling mivantana mahitsy dia iray amin'ireo fitaovana mekanika voalohany indrindra sy lehibe indrindra novokarina tamin'ny fitaovana fanodinana lalina fitaratra. 1. Ny motera misy ny milina fitaratra milamina beveling no zava-dehibe indrindra, ary ny fepetra takiana aminy koa dia ...
Inona no atao hoe milina polishing farany an-dranomasina ary ahoana no hividianana ilay mety?
Mangataka be ny vokatra vera. Ny singa sasany dia manome fampiasa, fa ny sasany kosa manintona. Tian'ny olona ny sombin'ny vera noho ny mangarahara, ny hatsarany ary ny hatsarany. Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa farany, mpivarotra fitaratra maro no manolotra entana marobe. Ho ...
Atsinanana 13, Haitian Road, Gaoming, Foshan, Guangdong, Sina